नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : स्व. पुष्करलाल श्रेष्ठको "यात्रा बिदेशको चिन्ता स्वदेशको"
स्व. पुष्करलाल श्रेष्ठको "यात्रा बिदेशको चिन्ता स्वदेशको"
नेपाली पत्रकारिताका एउटा वास्तविक धरोहर, मलाई अत्यन्त माया र विश्वाश गर्नुहुने मेरा आदरणीय दाजु स्व. पुष्करलाल श्रेष्ठज्यु प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै वहाँको भर्खरै मात्र बजारमा उपलब्ध "यात्रा बिदेशको चिन्ता स्वदेशको" पढ्न म सबैलाई आग्रह पनि गर्दछु । हामी बिच भौतिक रुपमा नरहनुभए पनि पुष्करलालदाईलाई हामी सधैं स्मरण गरिरहने छौं । वहाँ बैकुण्ठमा बास बसे पनि वहाँका अत्यन्त क्रियाशिल सुपुत्र दिरेक लाल श्रेष्ठ हामी बिच हुनुहुन्छ र रहिरहनुहुने छ । पुष्करलाल दाइका बाँकी कार्यभार सम्हाल्दै वहाँका सपनाहरु साकार पार्न दिरेकजी, आदरणिय भाउजु र परिवारलाई हाम्रो सधैं साथ र सहयोग रहिरहने छ । यस अबसरमा मेरा आत्मिय मित्र कपिल काफ्लेजी र बिदुर गिरीजीलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु जो पुष्करलाल दाइका सधैं साथ रहेर वहाँलाई सघाउँदै आउनु भएको थियो र छ ।
* रामप्रसाद खनाल - अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च, अमेरिका
* प्रधान सम्पादक - नेपाल मदर डट कम, अमेरिका